Dukaamada 7-Eleven ee dalka Mareykanka soo jeedin doonaa waxyaabaha CBD ka hor dhamaadka sanadka.
Oo waxaa la odhan karaa waa horumar degdeg ah a si ammaan ah si ay u dhexgalaan cannabidiol, car la chaîne est la plus grande en termes de monde du nombre de magasins – 7-Eleven a plus que points de McDonald!
Waxad is barbardhigi kari lahaa 7-Eleven la Albert Heijn iyo Jumbo oo dhan, sidaas u badan, saameynna waa silsiladda "sahlo" ee dalka Mareykanka.
Dukaamada badankood waxay furan yihiin 24 saacadood 24, 7 maalmood 7 iyo marka laga reebo in America, ay ku jiraan 17 dalalka kale, oo ay ku jiraan Japan, Mexico, Australia iyo Shiinaha.
Horraantii January, silsiladda lahaa 64 319 laamaha. Sidaas awgeed, waxaan dhihi karaa in ay tani tahay horumar weyn in 7-Eleven bilaabi doontaa iibinta alaabta CBD sanadkan.
Iibso saliid CBD ah? Visitez la page des boutiques CBD.
Ce sont précisément les produits CBD de Phoenix ilmo , une société basée dans le Colorado – comment pourrait-il en être autrement?
Ilmada of Phoenix
Gabay Phoenix waxaa loo arkaa mid ka mid ah shirkadaha muhiim ah in suuqa iyo CBD ah 2010, waxa ay u egtahay iyo manufactures cannabidiol ku salaysan wax soo saarka
Dhanka, qaar ka mid ah 140 (!) qaabab kala duwan ayaa durba la saaray suuqa.
kadis ah, Dhammaan waxyaabaha ay ka samaysan yihiin hemp oo ma aha kuwa cannabis CBD-hodan.
Pour l’ instant, le déploiement de leurs produits CDB en mettant particulièrement l’ accent dans 7-Elevens sur les états du Nevada, du Colorado, du Massachusetts, l’ Illinois, le Maryland, Washington, DC, en Floride et en Californie, selon War-saxaafadeed mardi que l’affaire a été rendue publique.
Iyo in ka dhigan tahay in macaamiisha iibsan doonaan ugu yaraan in CBD 4 500 7-Eleven dukaamada ka hor dhamaadka 2018, tiradaasi in kici doonaa in ka badan 7 000 suuqyada maxaliga ah ee saddex sano gudahood.
"Waxaan ka farxisay in 7-Eleven Phoenix ilmada alaabta keena malaayiin Maraykan ah kuwaas oo ka faa'iidaysan karaan this caafimaadka dabiiciga saafi ah, ammaan ah oo la xaqiijiyey kale ", ayaa sheegay in aasaasaha brand Janet Sweeney Rosendahl-CBD.
Waxaan rajeyneynaa in galaya marxalad cusub la supplements wax ku ool ah, guud iyo hemp hadda jira si fudud u heli karo dukaamada maxaliga ah. "
Sida laga soo xigtay Forbes magazine ganacsi, suuqa CBD waxaa ku hayaa warbixinta kooban ee: in 2020, ma waxa aan hoos loo kordhiyo 700%!
Iibso saliid CBD ah? Afficher les adresses de confiance
Categories Huile de CBD ChanvreTags iibsan saliid Belgium CBD, acheter l'huile cbd, huile cbd achat, huile cbd Belgique, huile cbd pas cher, Où acheter de l'huile de CBD en ligne	Post navigation